Olona telo no voarohirohy ho tompon`antoka amin` ity raharaha ity: ny Minisitry ny fitsarana teo aloha, ny tale jeneralin` ny ENMG teo aloha ary mpiara-miasa amin` izy ireo no iray farany. Herintaona aty aoriana vao nanokatra ny fanadihadiana nataony teny anivon` ny fitsarana miady amin`ny kolikoly ny BIANCO momba ny fandorana antontan-taratasy teo anivon` ny sekoly ambony ENMG. Ho an` ilay minisitra manokana dia ny Fitsarana ambony na Haute cour de Justice (HCJ) no mandray an-tanana ny raharaha. Raha tsiahivina, ny 8 martsa 2018 no may nisy nandoro tao amin`ny foibe toeran` ny ENMG ireo antontan-taratasim-panadianana izay nokendrena ho atao porofo tamin` ny fanadihadiana nataon` ny BIANCO. Ity fanadinam-panajakana ity moa dia nofoanana noho ny fisian` ny fitarainana maro amin`ny fisian` ny kolikoly. Saropady ny tontolon’ny fitsarana, izay efa malaza amin’ny resaka kolikoly koa anefa, miandry ny ho tohin’ity raharaha ity ny rehetra satria maro no efa nitaraina momba io kolikoly any anaty fitsarana io; ary mazava tsara izao fa vao mianatra kay izany ny mpitsara sy ny mpiraki-draharahan’ny fitsarana dia mety efa misy manao kolikoly ka tsy mahagaga raha manohy izay izy ireo rehefa am-perinasa.